တစ်ယောက်လျော့ဂျူဗီကို တစ်မှတ်ယူပေးပြီး ဥရောပဂိုးသွင်းစံချိန်သစ်တင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို - Shwe Soccer
တစ်ယောက်လျော့ဂျူဗီကို တစ်မှတ်ယူပေးပြီး ဥရောပဂိုးသွင်းစံချိန်သစ်တင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို
စီးရီးအေလက်ရှိချန်ပီယံဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ ရိုးမားနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာ ၂ဂိုးစီသရေကျသွားခဲ့ပြီး အသင်းအတွက် ရော်နယ်ဒိုက ချေပဂိုးတွေသွင်းယူပြီး ကယ်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးမားအနေနဲ့ ဦးဆောင်ဂိုးတွေ အကြိမ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ရော်နယ်ဒိုက ပြန်လည်ချေပခဲ့ပြီးတော့ ဂျူဗီအတွက် ရောမမြေမှာ အဖိုးတန်သရေတစ်မှတ်ကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဒုတိယသွင်းဂိုးဟာ တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အမြင့်ခုန်နိုင်စွမ်းအားကို ထပ်မံပြသသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှူးဟာ ညာတောင်ပံကဖြတ်တင်ပေးပို့ခဲ့မှုကို ခေါင်းတိုက်သွင်းယူခဲ့ရာမှာ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေထက် ပိုမိုမြင့်မားအောင်ခုန်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်လျော့နေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို သရေရရှိအောင် ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
CRISTIANO RONALDO GOAL 🤩 pic.twitter.com/2cH22qLDbx
ရော်နယ်ဒိုအတွက်တော့ ဒီသွင်းဂိုး ၂ဂိုးဟာ ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်တွေမှာ သွင်းဂိုးပေါင်း ၄၅၀ အထိ ပြည့်မြောက်စေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ ဒီလိုဂိုးအရေအတွက်ရရှိတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပြိဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီးအေအဖွင့်ပွဲမှာလည်း ဂျူဗီအတွက် တစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးဟာ နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ စံချိန်သစ်ပါ စိုက်ထူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
epa08702652 Cristiano Ronaldo of Juventus celebrates after scoring the 2-2 goal during the Italian Serie A soccer match between AS Roma and Juventus FC at Olimpico Stadium in Rome, Italy, 26 Semptember 2020. Dostawca: PAP/EPA.
နည်းပြပီယာလိုအတွက်တော့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ဘယ်လိုမှကို အနားပေးလို့မရတဲ့ ကစားသမားအဖြစ် ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ပွဲတချို့မှာ အနားပေးသွားမယ်လို့ ပီယာလိုက ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်လည်း အရေးအကြောင်းကြုံတိုင်းမှာ အသင်းကို ကယ်တင်ပေးနေတဲ့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ခြေစွမ်းကြောင့် ပီယာလိုအတွက်တော့ သူ့ကိုလူစာရင်းကချန်လှပ်ပြီး အနားပေးဖို့က တော်တော်လေးစဉ်းစားရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စီးရီးေအလက္ရွိခ်န္ပီယံဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဟာ ရိုးမားနဲ႔အေဝးကြင္းပြဲစဥ္မွာ ၂ဂိုးစီသေရက်သြားခဲ့ၿပီး အသင္းအတြက္ ေရာ္နယ္ဒိုက ေခ်ပဂိုးေတြသြင္းယူၿပီး ကယ္တင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးမားအေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ဂိုးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ေရာ္နယ္ဒိုက ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့ၿပီးေတာ့ ဂ်ဴဗီအတြက္ ေရာမေျမမွာ အဖိုးတန္သေရတစ္မွတ္ကို ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။
ေရာ္နယ္ဒိုရဲ့ ဒုတိယသြင္းဂိုးဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ့အျမင့္ခုန္နိုင္စြမ္းအားကို ထပ္မံျပသသြားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္တိုက္စစ္မႉးဟာ ညာေတာင္ပံကျဖတ္တင္ေပးပို႔ခဲ့မႈကို ေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ရာမွာ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမားေတြထက္ ပိုမိုျမင့္မားေအာင္ခုန္ခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ေလ်ာ့ေနတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းကို သေရရရွိေအာင္ ကယ္တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
ေရာ္နယ္ဒိုအတြက္ေတာ့ ဒီသြင္းဂိုး ၂ဂိုးဟာ ဥေရာပထိပ္တန္းလိဂ္ေတြမွာ သြင္းဂိုးေပါင္း ၄၅၀ အထိ ျပည့္ေျမာက္ေစခဲ့တာလည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုဂိုးအေရအတြက္ရရွိတဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားလည္းျဖစ္လာခဲ့ၿပိျဖစ္ပါတယ္။ စီးရီးေအအဖြင့္ပြဲမွာလည္း ဂ်ဴဗီအတြက္ တစ္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ေပၚတူဂီတိုက္စစ္မႉးဟာ ႏွစ္ပြဲဆက္တိုက္ဂိုးသြင္းယူနိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ စံခ်ိန္သစ္ပါ စိုက္ထူသြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။
နည္းျပပီယာလိုအတြက္ေတာ့ ေရာ္နယ္ဒိုဟာ ဘယ္လိုမွကို အနားေပးလို႔မရတဲ့ ကစားသမားအျဖစ္ ရွိေနၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ့ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ပြဲတခ်ိဳ႕မွာ အနားေပးသြားမယ္လို႔ ပီယာလိုက ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း အေရးအေၾကာင္းၾကဳံတိုင္းမွာ အသင္းကို ကယ္တင္ေပးေနတဲ့ ေရာ္နယ္ဒိုရဲ့ ေျခစြမ္းေၾကာင့္ ပီယာလိုအတြက္ေတာ့ သူ႔ကိုလူစာရင္းကခ်န္လွပ္ၿပီး အနားေပးဖို႔က ေတာ္ေတာ္ေလးစဥ္းစားရေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article ဆွာရက်ဇ်ကို ဘာစီလိုနာက ဘာလို့ရောင်းတာလဲ သူနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ ဒီယေဂိုကော်စတာ
Next Article အဲလက်စ်တယ်လက်စ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်